U KO NI – Melissa Crouch
Category Archives: U KO NI
[pdf version available here] ဦးကိုနီသို့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဂုဏ်ပြုတမ်းချင်း မလီဆာ ခရောက်ခ်ျ (Melissa Crouch)၊ ဧည့်ဆောင်းပါးရှင်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့က ထင်ရှားသည့် မွတ်စလင်မ် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီသည် လုပ်ကြံမှုလို့ ယူဆရတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အသေပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မလီဆာ ခရောက်ခ်ျ (Melissa Crouch)က သူ့ဘဝ တစ်စေ့တစ်စောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသိစိတ်ရှိသော ဥပဒေရေးရာ အသံတစ်ခု၏ အမွေအနှစ်အကြောင်း ထင်ဟပ်တင်ပြထားပါသည်။ဤရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ ဖြစ်လာတော့မယ့် တိုင်းပြည်အမျိုးအစားကို မျက်မှောက်ပြု ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ တွန်းအားပေးခံကြရပါပြီ။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉မှာ ထင်ရှားတဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးကိုနီဟာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာContinue reading “Burmese translation: Tribute to U Ko Ni”
Media release by the Australia Myanmar Constitutional Democracy Project The assassination of U Ko Ni, at Yangon airport on 29 January, is devastating, tragic, news. His death will distress all who knew him and all who knew the service he gave his country. U Ko Ni wasadistinguished lawyer,alegal adviser to Aung SanContinue reading “AMCDP tribute to U Ko Ni”
Posted byMelissa Crouch January 30, 2017 January 18, 2021 Posted inAUSTRALIA, MYANMAR, TRIBUTE, U KO NITags:Post